DAAWO: Raaxada Farta Iyo Biyaha Kulul Sidee Loo… - Hablaha Media Network
DAAWO: Raaxada Farta Iyo Biyaha Kulul Sidee Loo…
HMN:- Naagaha labo ayay u kala baxaan naago dareenkooda kore aad u daran iyo kuwo aan darnayn, dareenka kore waxaa laga wadaa camabarka afkiisa hore iyo faruuraha siilka, gabdho waxaa jira aad ugu raaxaysto faraha, marka ay dareemaan qooq farta isgaliya, xitaa uma baahna inay faraha boqa galiso, keliya waxaa ku filan inay meesha ku rugto kuna salaaxdo.
Riix halkan Oo daawo siday u siigaystan
Naagaha qaabkaas ayay ku siigaystaan waa sidaasi, siigada naagah faraha ayay ku bilaabataa, inkastoo gabdhaha sidaas ay u badan yihiin, laakin garoobada waxay raadsadaan wax farta ka weyn sida mooska oo kale ama qajaarka, naagta maku biyabbixi kartaa faraha?
Runtii dumarkeena biyaha fudud aad bay ugu biyabbaxaan farta, laakin kuwa biyahooda soo daaho faraha kuma filna waxay u baahan yhiin gus, waayo guska wuu ka kulul yahay farta waana ka weyn yahay, sidoo kale waa ka macaan badan yahay. meesha oo dhan ayuu buuxiyaa, farta dhib ma ku keentaa naagaha?
Gabdhaha waxaa laga yaabaa inay bigradooda ku waayaan marka ay bartaan siigada faraha, laakin garoobta dhinacaan waxba kama qaadayso, waxaa kaloo jira dhib kale, kaas oo ah, naagta marka ay far u barato kuma raaxaysan karto geedka ninka.
Waxay sii raboonaysaa inay faraha is geliso nimka isagoo shqada wado, waxaa kaloo la mid ah faraha biyaha kulul, haween waxaa jira marka ay rabaan inay siigaystaan biya kulul qaato marka siilkooda shab ku siiya raaxo badan ayay kala kulmaan.